ISwallows inephupho lokudlala imidlalo yase-Afrika - Impempe
ISwallows inephupho lokudlala imidlalo yase-Afrika
April 23, 2021 April 23, 2021 Impempe.com
UBrandon Truter oqeqesha iSwallows FC
Abawazi kahle umdlalo wabakhaya baseSoweto wangampela bazokutshela ukuthi akuwona lo osuke uphakathi kwe-Orlando Pirates neKaizer Chiefs, osudume i-Afrika yonke.
Empeleni iChiefs bathi iyizingane nje ezifike ngo-1970 uvele usudlalwa umdlalo wezimbangi zaseSoweto phakathi kwePirates neSwallows FC. IZinyoni eziyibambe endaweni yesihlanu kwi-log zizobhekana neBucs esendaweni yesine emdlalweni weDStv Premiership eDobsonville Stadium, ngoMgqibelo ngo-5 ntambama.
Umehluko phakathi kwala maqembu yiphuzu elilodwa vo njengoba esedlale imidlalo engu-22 womabili. IBucs inamaphuzu angu-38 kanti ukuwina ngoMgqibelo kungayibeka ethubeni lokunyukela endaweni yesibili. Ngakolunye uhlangothi iSwallows ena-37 ukuwina kuzoyenza ibe ngaphezulu kweZimnyama.
Umqeqeshi weSwallows uBrandon Truter wazi kahle ukuthi ngeke kube lula ukushaya iPirates yize bezobe bedlalela ekhaya ngoMgqibelo.
“Umdlalo onzima, umdlalo ongelula. YiPirates le, yiqembu elikhulu kakhulu. Leli yiqembu elingashaya noma yiliphi iqembu eNingizimu Afrika. Nokho ukuthi lona umdlalo wabakhaya kuzodlala indima enkulu kakhulu,” kusho uTruter.
“Ngethemba ukuthi lokho kuzobagqugquzela kakhulu abadlali. Ngemuva kokudlala neCeltic emahoreni angu-48 edlule, ukuthinteka kwabadlali okuba khona emdlalweni yinto okumele siyiqaphele. Ukufaka abadlali abangu-11 okuyibona abahamba phambili kuzoza nenselelo kukodwa.”
ISwallows igcine ibambane neBloemfontein Celtic ngo 1-1 ngoLwesibili, kanti iBucs yona igcine ishaye iMaritzburg United ngo 2-0 ngeSonto.
“Uma uya kulo mdlalo awufuni ukwenza ushintsho olukhulu kubadlali bakho abangu-11 ohlezi uqala ngabo umdlalo. Ngakolunye uhlangothi ufuna ukufaka abadlali okuyibona abamqoka enkundleni. Ngijabulile okwamanje, akekho umdlali uphume nokuthinteka okukhulu.
“Bonke abadlali bakulungele ukudlala kodwa isimo sokukhathala naso sizoba nomthelela. Nokho lona umdlalo wethu wasekhaya, beza eDobsonville. Sisenerekhodi lokungashaywa eDobsonville futhi sifuna ukukugcina lokho. Sizofaka abadlali abangu-11 okuyibona ababalulekile kithina. Ngithemba ukuthi nasebhentshini sizokwazi ukuphatha umdlalo nokuyinto ebalulekile.
“Ibhentshi lethu lizodlala indima ebalulekile ngoba abadlali abayibambe sibhekene neCeltic bazokwazi ukusithatha basibeke lapho bengakwazi khona. Uma ubheka umdlalo esiwudlale neCeltic abadlali abangene besuka ebhentshini abawenzanga umehluko otheni. Sisebenza kulokho futhi sikhulumile nabafana,” kusho uTruter.
Mayelana nokudlala kahle kule sizini yize bephuma ehlathini uTruter uthe: “Sifuna ukushintsha izinto kodwa kumele sikubeke emqondweni ukuthi ithuba lokudlala e-Afrika lisekhona. Angiyiboni iSundowns ishaywa emidlalweni emithathu noma emine ukuze siyifice nomake elinye iqembu. Kodwa njengoba ngishilo likhona ithuba lokudlala e-Afrika, iyona into esigquqguzelayo leyo.”
Previous Previous post: Engabe bebengenwe yini becabanga ukusungula iSuper League
Next Next post: UKhune uthi bengayiqumba phansi kungabi ndaba zalutho iSundowns